Jabuuti oo difaacday Warbixinta Gudiga IGAD | KEYDMEDIA ENGLISH
Qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jabuuti ayaa lagu sheegay in uusan shaki ku jirin in gudiga uu usoo diyaariyay warbixinta si xirfad iyo dhexdhexaadnimo ku jirtay.
JABUUTI - Dowladda Jabuuti ayaa ka jawaabtay eedeynta Maamulka Farmaajo ee ku saabsan in Warbixintii gudiga xaqiiqo-raadinta IGAD ay ahayd mid hal dhinac u janjeerta oo xogta ku jirta ay tahay mid danta Kenya ka tarjumeysa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jabuuti ayaa qoraal Maanta soo saartey ku sheegtay in gudiga IGAD uu shaqada usoo qabtay si xirfad iyo dhex-dhexaadnimo ku jirto, islamarkaana warbixinta loo gudbiyay hogaanka Ururka goboleedka.
Xogta waxaa lagu saleeyay baaritaanka lagu sameeyay eedeymaha dowladda Soomaaliya u jeedisay Kenya, ee ahaa inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dalka, islamarkaana ay Mandheera ku hubeynayso malleeshiya uu wata C/rashiid Janan.
Waxay ku doodaysaa dowladda Soomaaliya in xubnaha gudiga markii ay Muqdisho tageen ay diideen inay booqdaan gobolka Gedo si xaaladda dhabta ah usoo arkaan, iyadoo labo jeer ay tageen Mandheera oo dhinac Kenya ah.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe ayaa sheegay in Jabuuti ay meel uga dhacday, islamarkaana dhaawac jiri doono 100 sano ay gaarsiisay walaaltinimadii kala dhaxaysay, isagoo ku eedeeyay inay la safatay Kenya.
Lama oga xiisadda cusub ee Soomaaliya iyo Jabuuti halka ay ku biyo shuban doonto, iyadoo aan wali xal laga gaarin mida Kenya oo Maamulka Farmaajo xiriirka u jaray sanadkii tagey.
Jabuuti waxay sheegtay in ujeedkeedu ahaa inay dhexdhexaadiso Soomaaliya iyo Kenya, islamarkaana gudiga lagu dhisay shirkii 38aad ee IGAD oo 20-kii December ka dhacay Jabuuti, kaasoo qabsoomidiisa ku timid dalabka Farmaajo.
Warbixinta gudiga oo shalay soo baxday ayaa lagu sheegay inaysan waxba ka jirin eedeymaha dowladda Soomaaliya ee ah in gudaha Kenya Malleeshiyaadka Janan ay ku sugan yihiin, islamarkaana aan Kenya faragelin ku heynin dalka.
Waxay kaloo sheegtay Warbixinta in sabab la'aan Farmaajo xiriirka ugu jaray Kenya, oo ay ogaadeen in go'aanka uu qaldanaa, waxaana loogu baaqey labada dhinac inay dib usoo celiyaan cilaaqaadkooda.
0 Comments Topics: jabuuti kenya soomaaliya